Reviews Archives - SmartMe
Dom » Ku keydi qeybta 'Faallooyinka'
Oclean X Pro Elite - cadayga ugu fiican adduunka!
Caday ilkaha ugu fiican adduunka. Kaliya! Oclean X Pro Elite wuxuu garaacayaa dhammaan buraashyada kale ee madaxa! https://youtu.be/oeDhD9Qkoyk
dib u eegista, Samsung Smart Waxyaabaha, telefishannada
Samsung Frame TV - tijaabo masaafo dheer ah
qaabka farshaxanka, jir tv, Samsung, jir samsung, jir
Tan iyo markii Samsung ay soo saartay "Frame" ama Samsung Frame TV khadka qiyaastii 4 sano ka hor, waa la i qarxiyay. Waxay ahayd wax mustaqbal iyo quruxba leh isla waqti isku mid ah. Ku guuleysto fiilooyin iyo shaqo farshaxan oo aad jeceshahay halkii madow ...
Xiaomi Mi Watch Lite - dib u eegista qoraxda!
Sidee u qurux badan yahay banaanka! Marka waxaan kuu soo direynaa dib u eegis ku saabsan Xiaomi Mi Watch Lite oo toos ah Góra Słupecka! <3
Halkan waxaa ah nadiifiye mootada aan aqaano. Laakiin kaliya maahan robot caadi ah, laakiin aalado leh saldhig faaruq ah. Tanina sidoo kale waxay ka timid nidaamka deegaanka ee Xiaomi, maxaa yeelay waa aaladda loo yaqaan 'Viomi robot'! Kaliya faa'iidooyinka! : D
dib u eegista, Home smart
Reolink Argus 3 Pro oo leh qalab qoraxda ku shaqeeya
Waxa daabacay	Krzysztof
Argus, Argus 3 Pro, kamarad, kamarada banaanka, qalabka qoraxda, Dib u fur
Kamero websaydh yar oo u eg Minion cad, cosmonaut oo ku lebisan suud ama kaabsal ... Sug in yar, ayaan wax ka qoray goor dhoweyd. Iyo haa, waxay ahayd Argus 2E, walaalka ka weyn webcam-ka maanta la sharaxay. Dhinacyo badan oo aad isugu eg ama ...